ဝါးခယ်မ : December 2014
မအူပင်နည်းပညာကျောင်း ဆဋ္ဌမအကြိမ် အာစရိယ ပူဇော်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ ( 1-4)
ပထမအကြိမ် ကျေးဇူးတုန်.ပြန် ပူဇော်ပွဲ ကျင်းပစဉ်က
မအူပင်နည်းပညာကျောင်း - ကျောင်းသားဟောင်းများအသင်း ( Association of MAUBIN GTI , GTC , TU Alumni – AMTA ) မှ ဦးဆောင်ကျင်းပသော ဆဋ္ဌမအကြိမ် မြတ်ဆရာ ပူဇော်ပဲါ တ၇ားဝင် ထုတ်ပြန်ချက်များအား စုစည်းဖော်ပြပါသည် ။
( ၁ ) ကျင်းပရန် နေရာ အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း
ကျောင်းသားဟောင်းအသင်း ( AMTA ) မှ ဦးဆောင်စီစဉ်သော ဆဋ္ဌမအကြိမ် အာစရိယ ပူဇော်ပွဲဆိုင်ရာ ကျင်းပ ပြီးခဲ့သည်. အစည်းအဝေး ၂ကြိမ်အနက် အဓိက ကျသော ဆွေးနွေးမှု ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် များကို အစဉ်လိုက် ဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည် ။
ပထမဆုံး ဆဋ္ဌမအကြိမ် အာစရိယ ပူဇော်ပွဲ အတွက် နေရာ ရွေးချယ်ခဲ့မှုကို ဦးစွာတင်ပြပါမည် ။
ပြီးခဲ့သော အာစရိယ ပူဇော်ပွဲ ၅ ကြိမ်အနက် ပထမဆုံးအကြိမ်ကို မအူပင်မြို. သာသနာ. ဗိမ္မာန်တော် တွင်ကျင်းပ၍ ဒုတိယအကြိမ် ပူဇော်ပွဲ ကို Eagle Garden Restaurant တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီး တတိယအကြိမ် ၊ စတုတ္ထအကြိမ် ၊ ပဉ္စမအကြိမ် ပူဇော်ပွဲများကို တက္ကသိုလ် ဓမ္မာရုံ ( ရန်ကုန် - ပင်မတက္ကသိုလ် ) တွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည် ။
ယခု ဆဋ္ဌမအကြိမ် အာစရိယ ပူဇော်ပွဲကို မည်သည်.နေရာတွင် ကျင်းပလိုသည်ကို ကျောင်းသားဟောင်းများ၏ သဘောထား ဆန္ဒ ကောက်ယူခဲ့ပါသည် ။ ထိုသို.ကောက်ယူရခြင်းမှာ ရှေးဦးဆရာကန်တော.ပွဲများ ကျင်းပစဉ်က ရန်ကုန် တစ်လှည်. / မအူပင် တစ်လှည်. ကျင်းပမည်ဟူသော ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိထားခဲ့ခြင်း ၊ သို.သော် ဒုတိယအကြိမ် ကျင်းပပြီးနောက်ပိုင်း ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပခြင်းက သွားလာစီစဉ်မှု ပိုမိုလွယ်ကူခြင်း ကြောင်. တတိယအကြိမ်မှစ၍ ဆက်တိုက်ရန်ကုန်တွင်သာ ကျင်းပခဲ့ခြင်း များရှိခဲ့သဖြင်. အနည်းဆုံး ၅ နှစ်တစ်ကြိမ် ခန်.မအူပင်တွင်ကျင်းပစေလိုသည်ဟု အဆိုပြုမှုများ ရှိနေခဲ့ပါသည် ။
ထိုကိစ္စရပ်အတွက်ဆုံးဖြတ်ရာတွင် တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ပိုမိုစည်ကား ပြည်.စုံလာသော ဆရာကန်တော.ပွဲ၏ အရှိန်ကို ထိခိုက်မည်စိုး၇ိမ်ခြင်း ၊ အချိန် နှင်.. အခြေအနေအကန်.အသတ် ရှိသူများအဖို. မအူပင်တွင်သွားရောက်ကျင်းပလျှင် လိုက်ပါကန်တော.နိုင်မှု မရှိမည်ကို စိုး၇ိမ်ခြင်း ၊ ၇န်ကုန်တွင်ကျင်းပသကဲ့သို.ကျောင်းသားဟောင်းများ စည်ကားစွာ တက်ရောက်နိုင်မှုအတွက် ချိန်ဆခြင်း တို. ရှိနေသကဲ့သို. တစ်ဘက်တွင်လည်း မိမိတို.တက်ခဲ့သော ၊ နေခဲ့သော ကျောင်း / ဒေသ သို. အမှတ်တရ ပြန်သွားလိုကြခြင်း ၊ ၇န်ကုန် နှင်. အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ကွာဝေးသော ( နောက်ပိုင်းကျောင်းသားအများစု ဇာတြိေ မများတည်ရာ ဧရာဝတိတိုင်း) ဒေသမှ ကျောင်းသားဟောင်းများလည်း တက်ရောက်စေလိုခြင်း ၊အဆိုပြုသူများ၏ ဆန္ဒကို အလေးအနက်ထားထည်.သွင်းစဉ်းစားကြခြင်း ၊ကျောင်းတည်ရှိခဲ့ရာဒေသတွင် ကျောင်းသား/သူဟောင်းများ က သွားရောက်ပူဇော်ကန်တော.ခြင်းကြောင်. မသွားရောက်ဖြစ်ကြတော.သော ဆရာ/ဆရာမဟောင်းများ - ကျောင်းသား/သူဟောင်းများလည်း ရင်တွင်းဝယ် ပိုမိုအနှစ်သာရပြည်ဝသော ပွဲတစ်ခုအသွင်ခံစားကြရခြင်းများ ဖြစ်စေလိုသော ဆန္ဒကတစ်ဘက်ဖြစ်ခဲ့ကြရပါသည် ။
ထို.ကြောင်. Maubin GTC Group @ Facebook တွင် သဘောထားတောင်းခံခဲ့ရာ ၇၇ % က ၇န်ကုန်တွင်သာ ကျင်းပလိုသည်ဟု ဆန္ဒ ပြုခဲ့ကြပါသည် ။ နောက်တစ်ဖန် First Annual Meeting & Gathering of AMTA တွင်တက်ရောက်လာသူများအားထပ်မံ သဘောထားကောက်ခံရာတွင် ၈၁ % က ရန်ကုန်တွင်သာ ကျင်းပလိုကြောင်း ဆန္ဒပြုခဲ့ကြပါသည် ။ တတိယနှင်.နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဆဋ္ဌမအကြိမ်အာစ၇ိယပူဖော်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီဖွဲ.စည်းပြီးနောက် AMTA – CEC များနှင်. ကျင်းပရေးကော်မတီဝင်များအား သဘောထားကောက်ခံခဲ့ရာ ၈၀ % က ရန်ကုန်ကိုသာ အဆိုပြုခဲ့ကြပါသည် ။ ထို.ကြောင်. သဘောထားကောက်ခံရာတွင် ပျှမ်းမျှ ၈၀ % ခန်.ဆန္ဒရှိသော ရန်ကုန်တွင်သာကျင်းပ၇န်ဆုံးဖြတ်ပြီး မူလကျင်းပနေကျ တက္ကသိုလ် ဓမ္မာရုံ ကိုသာ စိစဉ်ခဲ့ကြပါသည် ။
သို.သော် ဤနေရာတွင် မိမိတို.အဖို.ထည်.သွင်းစဉ်းစားရမည်. အခြေအနေတစ်ရပ်ရှိနေခဲ့ပါသည် ။ Beyond the 60 days တွင် ထိုနေရာပတ်ဝန်းကျင်သည် မည်မျှ ခွင်.ပြုချက် ရှိနေ / မနေ ကို မည်သူမျှ တာဝန်ယူနိုင်သော အနေအထားရှိမနေပါ ။ ထိုကိစ္စရပ်မျိုးဆိုသည်ကလည်း ( ရံဖန်ရံခါ တွင် ) ကြိုတင်သိနိုင်သော ကိစ္စမျိုး မဟုတ်ပဲ အနီးကပ်မှသိရခြင်းမျိုး ( ဥပမာ - MES တွင်ကျင်းပခဲ့သော First Annual Meeting & Gathering of AMTA ကိစ္စရပ်တွင် အားလုံးဖိတ်ကြား - အစားအသောက်မှအစစီိစဉ်ပြီးချိန် အခမ်းအနားကျင်းပရန် တစ်ညအလိုမှသိ၇သဖြင်. မည်သို.မျှ ပြင်ဆင်ချိန်မရတော.ပဲ တစ်ပတ်တိတိရွှေ.ဆိုင်းခဲ့ရခြင်းမျိုး ) ရှိတတ်ပါသည် ။ ဤမျှကြီးမားကျယ်ပြန်.သော ကိစ္စရပ်များတွင် ထိုသို.အခြေအနေမျိုးကြုံမှ ချက်ခြင်းပြောင်းလဲစီစဉ်၇န် အခြေအနေမပေးသဖြင်. ထပ်မံတိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြရပါသည် ။
ထို.ကြောင်.နောက်ဆုံးတွင် အနည်းဆုံး၅ နှစ်တစ်ကြိမ် ခန်.မအူပင်တွင် အာစ၇ိယပူဇော်ပွဲ ပြန်လည်ကျင်းပပေးစေလိုသော ကျောင်းသားဟောင်းအချို.၏ ဆန္ဒကို ဖြည်.ဆည်းပေးလိုခြင်း ၊ ဆရာ / ဆရာမများ - ကျောင်းသား/သူဟောင်းများ မိမိတို. ပညာသင်ယူခဲ့ရာ- နေထိုင်ခဲ့ရာ ဒေသတွင် အနှစ်သာရပြည်.၀သော အာစရိယပူဇော်ပွဲတစ်ရပ် ပြန်လည်ကျင်းပပေးလိုခြင်း ၊ အချိန်-နေရာ - အခြေအနေ တို.ကို ရာခိုင်နှုန်းများစွာ ထည်.သွင်းတွက်ချက်နေ၇န် မလိုပဲ လုံးဝစိတ်ချ၇သော အစီအစဉ် တစ်ရပ်ဖြစ်စေလိုခြင်း တို.ကြောင်. ကျောင်းသားဟောင်း အနည်းစု၏ ဆန္ဒကို အများစုက နားလည်မှု ရှိစွာ လိုက်လျောရင်း ဆဋ္ဌမအကြိမ် အာစရိယပူဇော်ပွဲကို မအူပင်တွင်သာ ကျင်းပ၇န် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည် ။
ဆဋ္ဌမအကြိမ် အာစ၇ိယ ပူဇော်ပွဲကို ၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက် မနက် ၁၀း၀၀ နာ၇ိအချိန်တွင် မအူပင်မြို. သာသနာ.ဗိမ္မာန်တော် တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည် ။
( ၂ ) ကန်တော.ခံ ဆရာ/ဆရာမကြီးများ အရေအတွက် နှင်. ပူဇော်ကန်တော.၇န် ရန်ပုံငွေ အခြေအနေ - အချိုးအစား တင်ပြအသိပေးခြင်း
ဒုတိယအနေဖြင်. ကန်တော.ခံ ဆရာ / ဆရာမကြီးများဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို တင်ပြအသိပေးပါမည် ။
၂၀၁၄ ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် အာစရိယ ပူဇော်ပွဲတွင် ကန်တော.ခံ ဆရာ ၁၀၁ ဦးရှိခဲ့ပြီး ကွယ်လွန် ဆရာကြီး / ဆရာမကြီး ၂ ဦး နှုတ်လျှင် ၉၉ ဦးကျန်မည်ဖြစ်ပါသည် ။ ဆရာကန်တော.ပွဲများ စတင်ကျင်းပစဉ်ကပင် မူလချမှတ်စဉ်းမျဉ်းဖြစ်သော( ၁၉၉၁ မှ ၂၀၀၆ အတွင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးပြီး အသက် ၄၀ - လုပ်သက် ၂ နှစ် ) အရ ထပ်တိုးဆရာ/ဆရာမ ၇ ဦး ရှိသဖြင်. ယခုနှစ် ပမာဏ စာရင်းအရ ကန်တော.ခံ ဆရာ /ဆရာမ ပေါင်း ၁၀၆ ယောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည် ။ ထပ်တိုး ဆရာ/ဆရာမ ၇ ဦးမှာ ( ၁ ) ဒေါ်နန်.အေးအေးသင်း - EC ( ၂ ) ဦးရဲလွင်ဦး - MT ( ၃ ) ဒေါ်လတ်လတ်ဋ္ဌေး - စာပေ ( ၄ ) ဒေါ်အေးအေးစန်း - စာပေ ( ၅ ) ဦးဇော်မင်း - MP ( ၆ ) ဒေါ်ဥမ္မာဆွေ - EP ( ၇ ) ဒေါ်ညိုညိုလွင် - Bio Tech တို.ဖြစ်ပါသည် ။
ထိုကန်တော.ခံဆရာ /ဆရာမများတွင် ကျောင်းအုပ်ကြီး ( ၅ ) ဦး ၊ Civil - ၁၃ ဦး ၊ EC - ၁၃ ဦး ၊ EP - ၁၆ ဦး ၊ MP - ၁၂ ဦး ၊ MT - ၁၄ ဦး ၊ Mining - ၁ ဦး ၊ စာပေဋ္ဌာန - ၂၅ ဦး ၊ Bio Tech ၆ ဦးတို.ပါဝင်ပါသည် ။
ထိုအထဲတွင် ပင်စင်ယူပြီးသော ဆရာ/ဆရာမ ၉ ဦး ၊ နာမကျန်း ၁ ဦး ၊ ပင်စင်ယူပြီး ကာလရှည် နာမကျန်း ၃ ဦးပါရှိပါသည် ။
မိမိတို.အနေဖြင်. ယမန်နှစ်က ကန်တော.ခံ ဆရာ /ဆရာမ အားလုံးအား တစ်ဦးလျှင် ပုံမှန်ကန်တော.ငွေ ၂ သိန်းကျပ် ၊ ပင်စင်ယူပြီးသော ဆရာ/ဆရာမများအတွက် ထပ်ဆောင်းကန်တော.ငွေ ၁သိန်းကျပ် ၊ နာမကျန်း ဆရာ/ဆရာမများအတွက် ကျန်းမာရေး အပိုထောက်ပံ.ကြေး ၁သိန်းကျပ် ၊ ပင်စင်ယူပြီး ကာလရှည် နာမကျန်း ဆရာ/ဆရာမများအတွက် သီးသန်.ထောက်ပံ.ငွေ ၂သိန်းကျပ် နှုံးဖြင်.ထောက်ပံ.ပူဇော်ခဲ့ရာ ၂၁၂ သိန်းကျပ် ပူဇော်ကန်တော.ခဲ့ပါသည် ။ ယခုနှစ်တွင် ကောက်ခံရရှိငွေ အခြေအနေအရ မူလသတ်မှတ် စကေးအတိုင်း သင်.တော်သော နှုံးထား တစ်ခုကို ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပါသည်
ယခင်နှစ် စကေးနှင်. နှုံးထားအတိုင်း သတ်မှတ်ပူဇော်လျှင် ပူဇော်ကန်တော.ငွေ သီးသန်. ၂၂၈ သိန်းကုန်ကျမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည် ။
( ၃ ) အလှုငွေများ ဆက်သွယ်လှုဒါန်းနိုင်ရန် အသိပေးခြင်း
တတိယအနေဖြင်. ဆဋ္ဌမအကြိမ် မြတ်ဆရာ ပူဇော်ပွဲအတွက် ပူဇော်ကန်တော.ငွေများ ဆက်သွယ်လှုဒါန်းနိုင်ရန်ဆက်လက်တင်ပြသွားပါမည် ။
ပြည်တွင်းရှိ ကျောင်းသားဟောင်းများ အနေဖြင်.အလှုငွေများကို အောက်ပါ ကျောင်းသားဟောင်းများထံ ဆက်သွယ်လှုဒါန်းနိုင် ပါသည်။
ကိုဝင်းမော်သိန်း(မော်ကြီး)(၉၂-၉၄ EC ) (ဖုန်း-၀၉၇၃၀၇၉၈၃၇)
ကိုအောင်ကျော်စိန်(ကိုလတ်ကြီး)(၉၃-၉၅ EC ) (ဖုန်း-၀၉၃၁၈၅၅၅၁၅
ကိုကြည်ဝင်းသိန်း(၉၄-၉၆ EC ) (ဖုန်း-၀၉၅၀၈၃၈၄၁)
ကိုဇော်မင်းလွင်(၉၅-၉၇ EP ) (ဖုန်း-၀၉ ၇၃၁၀၇၉၁၄)
ကိုအောင်မျိုးဦး(၉၆-၉၈ MP ) (ဖုန်း-၀၉၂၅၄၂၀၄၃၃၁)
မအေးပပ(၉၇-၉၉ EC ) (ဖုန်း-၀၉၄၂၁၀၆၉၆၆၇)၊
ကိုဆန်းမောင်မောင်(၉၇-၉၉ MT ) (ဖုန်း-၀၉၅၀၄၂၃၄၀)
အိဖြူ(၉၉-၀၁ MT ) (ဖုန်း-၀၉၇၃၁၄၆၀၅၉)
စုစုလွင်(၀၀-၀၂ EC ) (ဖုန်း-၀၉၄၂၁၀၉၀၀၁၇)
၀တ်ရည်တင်(၀၁-၀၄ EC ) (ဖုန်း-၀၉၅၀၁၁၁၁၀)
စည်သူမျိုး(၀၁-၀၄ MP ) (ဖုန်း-၀၉၉၇၅၇၃၉၀၄၃)
ဖြိုးမင်းအောင်(၀၂-၀၄ MC ) (ဖုန်း-၀၉၅၀၂၉၁၀၇)
ထုးမြတ်နိုးဇင်(၀၃-၀၅ EC ) (ဖုန်း-၀၉၂၅၀၁၇၈၃၆၃)
၀င်းမင်းအောင်(၀၂-၀၄ Bio tech) (ဖုန်း-၀၉၄၄၈၀၃၂၄၇၈)
ထို.အပြင် ကျောင်းသားဟောင်းအသင်း Unit အလိုက်တာဝန်ခံအဖွဲ.များ ၊ CEC များ နှင်. ကျောင်းသားဟောင်းအသင်း ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၂၅၃၁၉၅၆၈၇ သို.လည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် ။
စင်္ကာပူ ရောက် ကျောင်းသားဟောင်းများ အနေဖြင်.
၁။ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင် (၁၉၉၁-၉၃ EC) 9108 1242
၂။ ကိုဝေလင်း (၁၉၉၃-၉၅ EC) 8201 1834
၃။ ကိုသက်နိုင် (၁၉၉၄-၉၆ MP) 9239 9276
၄။ ကိုမင်းသိန်းဝင်း (၁၉၉၅-၉၇ EP) 9145 1865
၅။ ကိုကျော်ပိုင် (၁၉၉၆-၉၈ EC) 9456 4152
၆။ ကိုအောင်မျိုးမြင့် (၁၉၉၇-၉၉ EP) 9673 8538
၇။ ကိုနိုင်နိုင်ဇော် (၁၉၉၈-၀၀ EP) 9619 7027
၈။ ကိုစောအောင်နန္ဒာလင်း (၁၉၉၈-ဝဝ MP) 9366 2972
၉။ ကိုဂျွန်စသက်ပိုင်ဦး (၂၀၀၀-၀၅ MP) 8161 0994
၁ဝ။ ကိုအောင်မျိုးဇော် (၂၀၀၀-၀၂ EC) 9450 6441
၁၁။ ကိုမင်းသစ်ဖြူ (၂၀၀၀-၀၅ EC) 8511 0819
၁၂။ ကိုဇော်ထက်အောင် (၂၀၀၂-၀၇ EC) 9477 4566
၁၃။ ကိုမြတ်ကို (၂၀၀၂-၀၇ EP) 9338 6775 တို.မှ တာဝန်ယူကောက်ခံပေးမည်ဖြစ်ပြီး Peninsula Plaza ၅-လွှာရှိ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်၏ "မြနန်းနွယ်" ဆိုင်သို.လည်း သွားရောက် လှူဒါန်းနိုင်သည်ဟုသိရပါသည် ။
ကျောင်းသားဟောင်းများအနေဖြင်. မိမိတို.ဆရာ/ဆရာမများအား ပူဇော်ရန် ပါဝင်ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးလိုပါကလည်း ကျောင်းသားဟောင်းအသင်း (သို.) ကျင်းပရေးကော်မတီ ထံဆက်သွယ်ပေးနိုင်ပါရန် လှိုက်လှဲစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် ။
( ၄ ) သွားရောက် မည်.ခရီးစဉ် အခြေအနေ နှင်. ဧည်.ခံမှုအပိုင်းများ အသိပေးခြင်း
စတုတ္ထအနေဖြင်. မအူပင်သို.သွားရောက်မည်. ခရီးစဉ် စီစဉ်ထားမှု နှင်. ဧည်.ခံရန် စီစဉ်ထားမှု များအားအသိပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည် ။
၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက် မနက် ၁၀နာရီ မအူပင်မြို. သာသနာ.ဗိမ္မာန်တော်တွင် ကျင်းပမည်. ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် မအူပင် GTI , GTC , TU ကျောင်းသား/သူ ဟောင်းများ အာစရိယ ပူဖော်ပွဲသို.သွားရောက်ရာတွင် ကားများဖြင်. သွားရောက်မည်.အစား သင်္ဘောဖြင်.သွားရောက်၇န် စိစဉ်ထားပါသည် ။
ကားဖြင်. သွားလျှင် လမ်းသစ်မှသွားပါက ၁နာရီ ခွဲ ( လှိုင်သာယာ မှ မအူပင် ) သာအချိန်ကြာမြင်.သော်လည်း မိမိတို.ကျောင်းတက်စဉ်က ဘ၀များကိုပြန်လည် သတိရတမ်းတကြစေလိုသောကြောင်.လည်းကောင်း ၊ ခရီးစဉ်ကာလ ( Driving Time ) အတွင်း သူငယ်ချင်းဟောင်းများ စကားဝအောင်ပြောရင်း ပတ်ဝန်းကျင် မြစ်ကမ်းပါးအလှအပများခံစားကာ ပျော်ရွှင်စွာ သွားလာနိုင်ရန်အတွက် လည်းကောင်း ရည်ရွယ်လျှက်၂ထပ်ခွဲသင်္ဘောစီးလုံးငှား ခရီးစဉ်ဖြင်.ဖြင်. စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်
ခရီးစဉ်အနေဖြင်. ၂၀၁၄ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ.မနက် ၅နာရီခွဲတွင် သတ်မှတ်ဆိပ်ကမ်းတွင် ဆုံကြမည်ဖြစ်ပြီး မနက် ၆နာရီ တိတိတွင် မအူပင်မြို.သို. စတင်ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ပြီး မောင်းနှင်ချိန် Within4~5hour သတ်မှတ်ထားပါသည်( ဆရာ/ ဆရာမများအတွက် နံနက်အစောစာ စီစဉ်ပေးပါမည် ) ။ မအူပင်ဆိပ်ကမ်းမှ သာသနာ.ဗိမ္မာန်သို. ( ဆရာ/ဆရာမများနှင်. ကျန်းမာရေးချို.တဲ့သူများမှလွဲ၍ ) လမ်းလျှောက်တက်ကြမည်ဖြစ်ပြီး အားလုံးစုံညီချိန်တွင် မြတ်ဆရာ ပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား စတင်မည်ဖြစ်ပါသည် ။
အခမ်းအနားအပြီးတွင် ကန်တော.ခံ ဆရာကြီး /ဆရာမကြီးများအား နေ.လည်စာဖြင်. ဧည်.ခံမည်ဖြစ်ပြီး တက်ရောက်ကျောင်းသား/သူများအတွက်အသင်.စား နေ.လည်စာ ဘူးများဖြင်. စိစဉ်ပေးထားပါမည် ။ထို.နောက် ၂နာ၇ိခွဲတွင် စုရပ်သို.ပြန်လည်ထွက်ခွာကြမည်ဖြစ်ပြီး ညနေ ၃နာရီတွင် ၇န်ကုန်သို. သင်္ဘောပြန်လည်ထွက်ခွာပါမည် ။ ဤနေရာတွင် အထူး သတိပေးလိုသည်မှာ အချိန်ကိုက်စီစဉ်ရသော ကိစ္စရပ်ဖြစ်သဖြင်.(မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ သီးခြားအချိန်တိုးစောင်.ဆိုင်းရန် မရှိပဲ )သတ်မှတ်အချိန်များအတိုင်းသာ လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည် ။
သင်္ဘော နှင်. ပြန်လည် လိုက်ပါလာမည်. ကန်တော.ခံ ဆရာကြီး /ဆရာမကြီးများအတွက် ညနေစာကို မအူပင်မှ စီစဉ်ယူဆောင်လာမည်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသား /သူ ဟောင်းများအတွက်မူ အအေး / ရေသန်.တို.ကိုသာ သယ်ဆောင်လာပေးမည်ဖြစ်ပါသည် ။
ယခုခရီးစဉ်သည် အများ ဆန္ဒရှိကြသဖြင်. ဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးထားသော ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီး တစ်ဦးချင်းစိ၏ အန္တရာယ်ကင်းမှု နှင်. အများ၏ လုံခြုံရေး အားလုံးတို.သည် လိုက်ပါကြမည်.သူ တစ်ဦးချင်းစီ၏ စည်းကမ်းရှိမှု ၊ သိတတ်မှု ၊ ပူးပေါင်းကူညီစောင်.ထိန်းမှု တို.အပေါ်အထူးတည်မှိနေပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည် ။
ပထမအကြိမ် သက်ဆိုင်ရာများနှင်.တွေ.ဆုံတိုင်ပင် ညှိုနှိုင်းမှု အရ သဘောင်္စ၇ိတ် သီးသန်. ၁၂သိန်းခန်.ကုန်ကျမည်ဟု ပမာဏ တွက်ချက်ထားပါသည်( ဒုတိယအကြိမ် အသေးစိပ်တွေ.ဆုံညှို နှိုင်း ၇န် ရှိပါသေးသည် ) ။ ထိုငွေကို အာစ၇ိယ ပူဇော်ပွဲရန်ပုံငွေမှ သုံးစွဲမည်ဖြစ်ပြီး ခရီးစဉ်အတွက် တစ်ပိုင်တစ်နိုင်သီးခြားလှုဒါန်းမှု ပြုလုပ်လိုသူများအနေဖြင်. ကော်မတီထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် ။
ထပ်မံမေတ္တာရပ်ခံလိုသည်မှာ ယခုခရီးအစီအစဉ်သည် အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များအရ နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ထားသော အခြေအနေများဖြစ်ပြီး အကယ်၍ မမျှော်မှန်းနိုင်သော အကြောင်း တစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်လာသဖြင်. ပြောင်းလဲမှုများ ရှိလာပါလျှင်လည်း အချိန်မှီ အသိပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည် ။
Posted by ကျောင်းတော်သားဟောင်း at 6:18 PM No comments:
Labels: Maubin GTI GTC TU